E-News Nepali || Fast and Accuracy » ‘सारङ्गी साँझ’लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा– रोम जलिरहँदा निरो पनि बाँसुरी बजाइरहेका थिए !
‘सारङ्गी साँझ’लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा– रोम जलिरहँदा निरो पनि बाँसुरी बजाइरहेका थिए !
काठमाडौं– सोमबार(हिजो) साँझबाट सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर भाइरल बनेको छ । तस्वीर कुन हो भन्ने तपाईंले पनि भेउ पाउनु भयो होला । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दयाँबायाँ नेकपाका दुई नेतालाई राखेर आफूले बाँसुरी बजाएको र दुई नेताले सारङ्गी रेटेको तस्वीर यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो ।
सोमबार बालुवाटारमा आयोजना भएको ‘सारङ्गी साँझ’ कार्यक्रमको एक तस्वीर भाइरल बनेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित नेपाली मौलिक बाजा र धुनहरुको ‘सारङ्गी साँझ’ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेकपाका सचिवालयका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सारङ्गी र बाँसुरी बजाएको कला प्रतिष्ठानका महासचिव डा देवी नेपालले जानकारी दिए । ‘‘पहिले उहाँले एक्लै सारङ्गी बजाउनुभएको थियो’, डा नेपालले भने, ‘‘त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सारङ्गी र प्रधानमन्त्री ओलीले बाँसुरी बजाउनुभएको थियो ।
डा.नेपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगणलाई मौलिक बाजा र धुनको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । पूर्वको लिम्बू जातिको पालमदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको देउडासम्मकोे १० प्रकारका धुन सो अवसरमा बजाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा सोमबार साँझबाट भाइरल बनेको उक्त तस्वीरलाईं धेरैले विरलै देखिने तस्वीरको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । भने कतिपयले यसको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
पूर्व माओवादी खै ?
सामाजिक सञ्जालमा ओली बाँसुरी तथा खनाल र नेपालले सारङ्गी बजाएको तस्वीरमा पूर्व माओवादी खेमा नेताहरु किन नभएको भन्दै कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले पार्टी एकताका विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन् । मञ्चमा पूर्व एमाले नेताहरुमात्र देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रचण्ड उपत्यका बाहिर रहेका कारण कार्यक्रममा सहभागी नभएको जनाइएको छ । कतिपयले बालुवाटार दैनिक मोजमज्जामा लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । अघिल्ला दिन नेकपाका केन्द्रीय नेतालाई भोज खुवाइएको बालुवाटारमा भोलिपल्ट बाँसुरी बजाइएको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन् । देश विकास भन्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु रमाइलोमा लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
सम्राट निरोसँगको तुलना
सामाजिक सञ्जालमा आलोचकहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलील र नेकपाका नेताहरुलाई तत्कालीन रोमका सम्राट(राज) निरोसँग तुलनासमेत गरेका छन् ।
‘रोम सहर जल्दा नि साम्राट निरो बाँसुरीको धुनमा मग्न थिए, रोम जलिरह्यो उनी बाँसुरी बजाइरहे’ सँग उक्त तस्वीरलाई केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले तुलना गरेका छन् ।
को थिए निरो ?
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले निरोबारे उल्लेख गरेका छन् । रोम जलिरहँदा निरो बासुरीमा मस्त भएजस्तै नेपालमा विकास निर्माण नहुँदा ध्वस्तको स्थितिमा पुगेको बेलामा बालुवाटारमा शासकहरु भने बाँसुरी बजाउन व्यस्त भएको र यो रोमका सम्राट निरोसँग तुलना योग्य रहेको सामाजिक सञ्जालमा बताउनेको संख्या कम छैन् । आखिर को थिए निरो ? जसको चर्चा अहिले भइरहेको छ ।
मानव सभ्यताको केन्द्र नै मानिसने रोममा निरो सन् १९५४ देखि १९६८ सम्मसम्राट थिए । १९ जुलाई १९६४ का दिन रोमको व्यापारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको आगोले चाँडै पूरै रोम नष्ट गरेको थियो ।
रोमका १४ मध्ये १० जिल्लामा ६ दिनसम्म आगो दन्किरह्यो । तीन जिल्ला पूर्णरुपमा सखाप भयो । इतिहासकारहरुका अनुसार रोम जलिरहँदा सम्राट निरो आफ्नो दरबारमा बाँसुरी बजाइरहेका थिए । उनी गीतसंगीतका सौखिन थिए । त्यो विनासकारी आगलागी ६ दिन पछिमात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यतिन्जेलसम्म आधाभन्दा बढी रोम जलिसकेको थियो ।
रोममा आगलागी भएर सकिन लागेको उनलाई दरबारमा सूचना पुर्‍याउँदा पनि उनी बाँसुरीको धुनमा मस्त रहेको बताइने गरिएको छ । तर कतिपयले भने रोममा आगलागी हुँदा उनी शहरमा नै नभएको पनि बताउने गरेका छन् । केही इतिहासकारले भने निरोकै योजनामा सहरमा आगो लगाइएको थिए । किनकी उनी रोमलाई पुनर्निमार्ण गर्न चाहन्थे ।
प्रकाशित मिति २५ माघ २०७६, शनिबार १८:०२